CCTV nyochaa QA220WE
Nke a ọkachamara ọkwa widescreen Ikanam 21.5 ”agba ileba anya na-enye HDMI, VGA, & BNC ntinye. Site na mgbakwunye BNC na-emepụtakwa ihe ọ ga - eme ka ọ rụọ ọrụ maka ngwa ọ bụla. Na-etu ọnụ 16.7 nde agba & FHD Mkpebi nyocha a ga - eme ka vidiyo gị dị ndụ.
CCTV nyochaa QA240WE
Nke a ọkachamara ọkwa widescreen Ikanam 23.8 ”agba ileba anya na-enye HDMI, VGA, & BNC ntinye. Site na mgbakwunye BNC na-emepụtakwa ihe ọ ga - eme ka ọ rụọ ọrụ maka ngwa ọ bụla. Na-etu ọnụ 16.7 nde agba & FHD Mkpebi nyocha a ga - eme ka vidiyo gị dị ndụ.
Nke a ọkachamara ọkwa widescreen Ikanam 27 ”agba ileba anya na-enye HDMI, VGA, & BNC ntinye. Site na mgbakwunye BNC na-emepụtakwa ihe ọ ga - eme ka ọ rụọ ọrụ maka ngwa ọ bụla. Na-etu ọnụ 16.7 nde agba & FHD Mkpebi nyocha a ga - eme ka vidiyo gị dị ndụ.